छक्का पन्जा ३ कि नायिका दिपिका लाई पारिश्रमिक कति ? – Ranga Darpan
छक्का पन्जा ३ कि नायिका दिपिका लाई पारिश्रमिक कति ?
वैशाख ११ , नायिका दिपिका प्रसाई लाई यहि १७ गते बाट छायांकन हुन लागेको चलचित्र छक्का पन्जा ३ मा लीइयको छ। उनीले यो भन्दा पहिले चलचित्र ‘ऐश्वर्य मा डेब्यु गरिसकेकी छिन ,। उनले चलचित्र हात पारे पछि नै उनि खुसि भयकि छन् ।चलचित्र मा उनको लुक्स र बोल्डले दर्शकको मन जित्यो तेही कारणले उनले यो चलचित्र पायको भन्न सकिन्छ।
चलचित्र ‘ऐश्वर्य पछि उनि करिब ७ महिना सम्म बाहिर आईनन ।, बिचमा उनको तेस्तो गसिप आय तर उनले तत्काल चलचित्र छक्का पन्जा ३ मा मुख्य भूमिकामा डेब्यु गर्दैछिन। ,उनको बिचमा पढाई भयको कारण बेस्त भयको उनले बताईन ।मेरो स्नात्तकोत्तर को पढाई अनि परिक्षा ले गर्दा बेस्त थिय यहि १४ गते बाट परिक्षा सकिन्छ १७ बाट फ्लिम गर्छु उनले भनिन।
अर्कोतिर, दीपिका र निर्देशक दिवाकर भट्टराइको प्रेम चर्चा पनि मिडियाका लागि बाहिर चर्चा आयो। तर जे जस्ता कुरा गरे पनि म तेती केयर गर्दिन ।, समाचार पढ्दा मलाई हाँसो लाग्छ, किन कि ? मैले काम गर्दा कहिले पारिश्रमिक तोक्ने गरेको छैन। , बाहिर ६ लाख भन्ने आको रैछ ,र अर्को कुरा यो प्रेम उफ , मैले तेस्तो डिमाण्ड कहिले गरेको छैन। दिपिकाले भनिन , मलाई छक्का पन्जा ३ को स्टोरी मन पर्यो अनि मैले ओके गरे ।
चलचित्र छक्का पन्जा ३ आउदो दशैँको फूलपाती सम्म रिलिज गर्ने गरि पोखरा र दमौलीमा छायांकन गरिने छ।